ဓမ္မဂင်္ဂါ: “Sex (သို့) ဘုရားသခင့်လက်ဆောင်”တဲ့လား
လွန်ခဲ့သော မဟာသင်္ကြန်တော်အခါသမယဆီက သီတဂူဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ခွင့်ရရှိခဲ့သည် သြ၀ါဒစကား ကိုလည်း နာယူခွင့်ရခဲ့သည်။ ပညာသင်နေကြသော ရဟန်းတော်များပေမို့ ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန ကိစ္စရပ်များကို အလေး ထားမိန့်ဆိုသွားသည်။ မဇ္ဈိမဒေသရှိ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများ အကြောင်းလေ့လာစရာ များစွာရှိသည်ကိုလည်း ထောက်ပြသွားသေးသည်။ ရှီဝလိင်ကိုးကွယ်မှု၊ ဂျိန်းဘာသာ စသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းတရားများ။
ဂျိန်းဘုန်းတော်ကြီးအား ဆွမ်းကပ်လှူနေသော ဒကာမများ
(ဂျိန်းဘုန်းတော်ကြီးမှာ အ၀တ်ဗလာဖြစ်နေပါ၍ ဆင်ဆာလွတ်မည့်ပုံကိုသာ တင်လိုက်ပါကြောင်း)
မဇ္ဈိမသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းစွာပင် လိင်ကိုးကွယ်မှု၊ ၀တ်လစ်စလစ်နေထိုင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ဘာသာတရားများကို အခိုင်အမာလက်ခံထားလေသည်။ ဟိန္ဒူအယူဝါဒတွင် ရှီဝလိင်ကိုးကွယ်မှုက အမြစ် တွယ်နေသည်။ ဂျိန်းဘာသာက အ၀တ်ဗလာဖြင့် အကိုးကွယ်ခံဖြစ်နေဆဲ။ အခြားသော ကိုယ်လုံးတီး ဆာဒူးကြီး များ၏ ကောင်းချီးပေးမှုကိုလည်း စုပြုံးတိုးဝှေ့ကာ ကိုးကွယ်ခံယူနေကြပြန်သေးသည်။ သို့ဆိုလျှင် မဇ္ဈိမ ပြည်ကြီးဝယ် ပညာသင်နေသော ရဟန်းတစ်ပါးအတွက် မိမိ၏ ဘာသာတရားမှတစ်ပါး အခြားသော အညတိတ္တိယတို့၏ လိင်သဘာဝနှင့် ပတ်သက်သောအတွေးအခေါ် အယူအဆများ ကိုလည်း လေ့လာသင့်သည် မဟုတ်လား။
လွန်ခဲ့သောနှစ်က ရွှေပြည်ကြီးသို့ ပြန်လည်ဆိုက်ရောက်ချိန် မဇ္ဈိမ၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအကြောင်းကို တရားပွဲ တစ်ခုတွင် မိတ်ဆက်ပြောပြဖြစ်သည်။ အ၀တ်မစည်း အချည်းနှီးသော အညတိတ္တိယ ဂျိန်းဘာသာဝင်များနှင့် အစေလကတက္ကဒွန်းများ ယနေ့ခေတ်တိုင် တည်ရှိနေဆဲဆိုသည်ကို ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းခွေနှင့်တကွ ပြသတော့ အားလုံးအံ့သြကြသည်။ ပိဋကတ်စာမျက်နှာထဲမှာသာ ရှိတော့သည်ဟု ထင်နေကြလေသည်ပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယမန်နေ့က အိန္ဒိယတိုင်းမ်စ်သတင်းစာမှ စကားပြောသောသစ်ပင်(Speaking Tree)ကို ဖတ်မိ တော့ မဇ္ဈိမ၏ လိင်သဘာဝအမြင်ကို တစ်စွန်းတစ်စ သိရသည်။ (၂၂-၀၄-၂၀၁၀)နေ့ကလည်း 'River Of The Life" စာတမ်းလေးကို “ဘ၀ကိုယ်တိုင်က မြစ်” ဟု ဘာသာပြန်တော့ ဘုံဘေတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သား မိတ်ဆွေရဟန်းတော်တစ်ပါးက ဘာသာပြန်လေး ဆက်လုပ်ပါဦး ဟု တွန်းသည်။
သို့နှင့် ၂၄-၀၄-၂၀၁၀စနေနေ့ထုတ် သတင်းစာထဲက အိုရှိုး(Osho)၏ ''Sex, Gift From God" ဆိုသော ဟော ပြောချက်ကို ဘာသာပြန်ဆိုလိုက်ပါသည်။ အိုရှိုးဆိုသည်က နှစ်ဆယ်ရာစုတွင် ထင်ရှားလှသော ဘာသာ ရေးဂိုဏ်းဆရာကြီးတစ်ဆူဖြစ်သည်။ သူ့အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကြဦးမည် ဟု သိရ၏။ ဘာသာပြန်ပါ အကြောင်းအရာများသည် မဇ္ဈိမကို နားလည်ရေးအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
လိင်သဘာဝမှ လွတ်မြောက်ခြင်းဟူသည် လိင်သဘာဝကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ လိင်သဘာဝကို နားလည်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ နားလည်ခြင်းဖြင့်သာ လိင်သဘာဝကို လွန်မြောက်နိုင်သည်။ သို့သော် လိင်သဘာဝကို ဆန့်ကျင်ရမည်ဟု မဆိုလို၊ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေရမည်၊ လူတိုင်းကိုလည်း တစ်နေ့တွင် လိင်သဘာဝကို လွန်မြောက်ကြလိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြုနိုင်ရပေမည်။
ရှီဝ၏ ယောက်ျားအင်္ဂါနှင့် ပရဗတီ၏ မိန်းမအင်္ဂါလိင်
ဘာသာတရားဟူသည် ကမ္ဘာမြေ၌ အမြစ်တွယ်ကာ နေသို့ ဦးတည်ရပေမည်။ ဘာသာတရားသည် ရွှံ့နွံ၌ အမြစ်တွယ်ကာ နေကို ဦးခိုက်သောကြာပန်းနှင့်တူသည်။ ကြာပန်းသည် နွံမှ လွတ်မြောက်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း နွံကိုတော့ လုံးဝအပြစ်တင်ဖွယ်မလိုပေ။ နွံသည် အာဟာရဖြစ်၏။ လိင်သဘာဝခွန်အားသည် စိတ်တည်ကြည်မှု သမာဓိအတွက် အာဟာရဖြစ်သည်။ လိင်သဘာဝရွှံ့နွံမှ သမာဓိကြာပန်းက ပွင့်ရပေမည်တည့်။ လိင်သဘာဝကို မည်သည့်အခါမှ မထိန်းချုပ်မိစေနှင့်။ မဆန့်ကျင်မိစေနှင့်။ ပြတ်သားသော အမြင်၊ကြီးမြတ်သောမေတ္တာဖြင့် နက်ရှိုင်းစွာ ချဉ်းကပ်ရပေမည်။ စူးစမ်းရှာဖွေသူတစ်ယောက်နှင့်တူစွာ လိင်သဘာဝကို ချောင်ကြိုချောင် ကြားမကျန် စူးစမ်းရှာဖွေလျှင် အံသြဖွယ်ရာတွေ့ကြုံရမည်သာမက အကျိုးစီးပွားလည်း ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပေ သေးသည်။
လိင်သဘာဝကို နားလည်သိရှိပြီဆိုလျှင် ဓမ္မကို သင်အလိုလိုသိမြင်လာပေမည်။ ထိုအခါတွင် သင်လွတ် မြောက်သွားမည်။ သင့်စွမ်းရည်သည်လည်း မြင့်မားလာပေမည်။ ယခုအခါတွင် လိင်သဘာဝသည် ကလေး ကစားစရာအရုပ်တစ်ရုပ်ဖြစ်၏။ သို့သော် သင်သည် ယင်းကစားစရာအရုပ်ကလေးနှင့် ဆော့ကစားနေသော အခြားသူများကို မြင်သည့်အခါ စိတ်အလိုမကျမှု ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတော့ပါ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို သင်နားလည်သွားကာ ကရုဏာပွားမိသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကို လိင်သဘာဝမှ လွန်မြောက်နိုင်ရေး အကူအညီပေးလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာ သည်။ အမှားတစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်၍ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကို ကဲ့ရဲ့ဖွယ်တော့ မရှိ။
လိင်သဘာဝသည် အပြစ်(sin)မဟုတ်။ လိင်သဘာဝကြောင့် မည်သူ့ကိုမှ အပြစ်ပေး၍ မရ၊ ငရဲကို ပို့၍မရပေ။ ဘုရားသခင်က လိင်သဘာဝကို သင့်အား ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် လိင်သဘာဝနှင့်အတူ မွေးဖွားလာသည်။ သင်က လိင်သဘာဝကို ဖန်တီးထားခြင်းမျိုးလည်း မဟုတ်ပေ။ နျူကလီးယားဗုံး၊ ဘက်နက်၊ ဓါးမြောင်၊ ပိုက်ဆံ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေး ဆိုသောအရာများသည်သာ အရုပ်ဆိုးသောလူသား၏ စိတ်မှ ပေါက်ဖွား သော အရာများဖြစ်ပေသည်။ ထိုအရာများကို တီထွင်ဖန်တီးသူတို့သာ ငရဲသွားရမည် ဧကန်ဖြစ်ပေ၏။ သို့သော် လိင်သဘာဝသည်ကား ဘုရားသခင်ပေးသောလက်ဆောင်မွန်ဖြစ်ပေ၏။ ကြီးမြတ်သောမျိုးစေ့လည်း ဖြစ်၏။ အစို့အညှောင့် ထွက်လာသည်နှင့် မြေကောင်းမြေမွန်ရှာဖွေကာ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ သန်းပေါင်းများစွာ ပန်းမာလာတို့ ထိုသစ်ပင်တွင် ဖူးပွင့်ကြပေမည်။
လိင်သဘာဝအားဖြင့် ကလေးသူငယ်သည်သာ မွေးဖွားသည်မဟုတ်၊ သင်သည်လည်း မွေးဖွားရပေမည်။ လိင်သဘာဝသည် ဖန်ဆင်းခြင်း၏ အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပေ၏။ လိင်သဘာဝအားဖြင့်သာ ဘ၀သစ်မွေးဖွား လာရပေသည်။ ဘ၀ထက် တန်ဖိုးကြီးသောအရာ ဘယ်အရာရှိမည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် လိင်သဘာဝကို ဘ၀ယာဉ်ရထားအဖြစ်ရွေးချယ်တော်မူခဲ့၏။ ဘ၀သည် လိင်သဘာဝမှ လာ၏၊ ဘ၀သည် လိင်သဘာဝ၌ လာ၏၊ ဘ၀သည် လိင်သဘာဝအားဖြင့်သာ လာရပေသည်။ လိင်သဘာဝကို သိမြင်ကာ လွန်မြောက်ပြီးသော သူတို့သည်ကား “အခြားသောဘ၀၊ ဓမ္မနှင့်ယှဉ်သော ဘ၀ဟူသည် လိင်သဘာဝအားဖြင့်သာ လာရသည်” ဟု ဆိုကြပေ၏။ သင်သည် လိင်သဘာဝအားဖြင့် နှစ်ဘ၀မွေးဖွားရပေမည်။ ရှင်သန်ထမြောက်ရပေမည်။ ဤလိင် သဘာဝဟူသည်မှာ ဘ၀ကိုပေးနိုင်သော စွမ်းရည်ထူးပေတည်း။
လိင်သဘာဝသည် မြင့်မြတ်၏၊ ဘုရားသခင်၏ ကျောင်းတော်လည်း ဖြစ်ပေ၏။ လိင်သဘာဝသည် ဓမ္မရေးရာအလားအလာကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်၏။ ရှာဖွေသူတစ်ယောက်သည် လိင်သဘာဝကို မည်သို့လျှင် စိတ်မ၀င်စားရှိရမည်နည်း။ အမှန်စင်စစ် ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် လိင်သဘာဝ၌ ပုဂ္ဂလိကစိတ်ဝင်မှုကား မရှိ။ လိင်သဘာဝကို လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်၏။ သို့သော် သူသည် အကြီးအကျယ်စိတ်ပါဝင်စားမှု ရှိနေပြန်၏။ လိင်သဘာဝမှ လွတ်မြောက်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ စိတ်ဝင်စားမှုက အလွန်ကြီးကျယ်တတ်သည်။ ယခုအခါ တွင် သူသည် အရာရာတိုင်းအပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားနေတော့၏။
သင်သည် လိင်သဘာဝအပေါ် စွဲလမ်းမိသောအခါ ကဗျာ၊ ဂီတ၊ နှင့် အလှတရားတို့ကို စိတ်ဝင်စား တော့မည်မဟုတ်ဘဲ လိင်သဘာဝကိုသာ စိတ်ပါဝင်စားနေတော့မည်။ အကယ်၍ ထိုအရာများကို စိတ်ဝင်စား သည်ဆိုပြန်ပါကလည်း ထိုအရာများတွင် လိင်သဘာဝအချို့ပါဝင်နေမှုကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ၉၉ ရာခိုင်နှုံးသော အနုပညာဖန်တီးမှုသည် လိင်သဘာဝကို အခြေခံရသည်ချည်းဖြစ်၏။ ၉၉ ရာနှုံးသော လူအများစုကလည်း လိင်သဘာဝမှလွဲ၍ အခြားအရာကို အလိုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်ရှင်၊ ၀တ္ထုနှင့် စာအုပ်များ(ဘာသာရေးအမည်တပ်ထားသည့် စာအုပ်များပင်လျှင်) လိင်သဘာဝများနှင့် ပြည့်နေတတ်လေ သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် လိင်သဘာဝသည် အပြစ်တင်ရှုံချခံရတတ်သည်။ သို့သော် ထိုအရာကိုပဲ ဆက်ပြောမြဲ ပြောနေကြဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၌မူ လိင်သဘာဝက ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ရသေးသည်။
လိင်သဘာဝမှ လွတ်ကင်းသောသူသည် လိင်သဘာဝ၌ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့။ သူ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကား ဘ၀တစ်ခုလုံးပေါ် ပြန့်နှံ့တည်နေတော့၏။
(Excerpted from I Say Unto You, Vol 2, Courtesy Osho International Foundation. www.osho.com )
မှတ်ချက်၊ Sex ဟူသောဝေါဟာရကို လိင်သဘာဝဟု သာမန်အားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုလိုက်ပါသည်၊
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 11:00 PM
အဓိပ္ပါယ်က ယူတတ်ရင်တော့ နက်ရှိုင်းပါပေတယ်။ လွန်မြောက်တတ်ဖို့အတွက် လမ်းစတစ်ခုပါပဲ။ တကယ်တော့ ဘဝထဲမှာ နေတဲ့သူတွေတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တာနော်။
ဟိုတစ်ခါ မေးထားတာလဲ အခုထိမဖြေ။
အခု ဘလော့ဂ်မှာ Sex ဆိုပြီး မေ့နေတာ အစဖော်တော့ ဒီတစ်ခါ နောက်တစ်ခု ထပ်မေးပါအုံးမည်။
“As for the Buddhist viewpoint, the third precept is not about illegal sexual relationship. It is about "sexual misconduct". Sexual misconduct will include adultery, and forced sexual relationship. What two consenting persons do in private cannot be construed as "sexual misconduct" even if it is illegal. Illegal means against the society's law, which may not be the same as universal laws, or laws of nature.”
အဲဒါလေး ဟုတ်မဟုတ် ဖြေပေးပါ ဘုရား။
ထိုမေးခွန်းများ၏ အဖြေကို တောင်မြို့ဆရာတော်ဘုရား၏ သင်္ဂြီုဟ်ဘာသာဋီကာ၊၀ီထိမုတ်ပိုင်း၊
တပည့်တော် အိန္ဒိယကို သွားတော့ ဂျိမ်း ဘုန်းကြီးတွေတွေ့ တော့ တော်တော်အံ့သြသွားပါတယ် ဘုရား။ ဒီ ဘုရားသခင်လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးကိုလည်း လိုက်ပြကြပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော် တစ်ခုပဲ တွေးလိုက်မိတယ်....သူတို့ခမျာ ဘုရားပွင့်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိပေမဲ့ ၃ နဲ့ ၄ လို ကျောချင်းကပ် အဝေးဆုံးရှိနေတော့တာ ၀မ်းနည်းစရာလို့။